Frenzic: Waqtiga dheeriga ah waa ciyaar xujo ah oo hadda laga heli karo Apple Arcade | Wararka IPhone
Frenzic: Waqtiga dheeriga ah waa ciyaar xujo ah oo hadda laga heli karo Apple Arcade
Ka dib muddo labo bilood ah oo ay hakad ku jirtay Apple Arcade, madal ay ku qoran tahay barnaamijka fiidiyowga ee Apple ayaa bilaabatay hel cinwaanno markale. Toddobaadkii hore, waan ka hadalnay Arcade: Halyeeyada Boqortooyada iyo kuwa ku biiraya dhawaan Alto Odyssey: Magaalada Lumay iyo Shimbiraha careysan: Dib ayaa loo soo raray oo lagu daray Doodle God Universe.
Ka hor intaan la soo saarin noocyada cusub ee Apple Arcade ee Alto's Odyssey iyo Birds Angry: Reloaded, waa inaan ka hadalnaa cinwaankii ugu dambeeyay ee hadda laga heli karo Apple Arcade: Frenzic: Waqti Dheeraad ah, cinwaan ay abuureen 'The Iconfactory', abuurayaasha Twitterrific, barnaamij cajiib ah oo Twitter ah.
Sida aan ka akhrisan karno sharraxaadda cinwaankan:
Frenzic: Waqtiga dheeriga ah wuxuu isku daraa khibrad soo jiidasho leh oo xawaare dheereeya leh sawiro qurux badan iyo dhawaq ku saabsan riwaayad aad ku bilaabi karto kuna ciyaari karto shan daqiiqo ama shan saacadood.
Isku soo uruurinta udub dhexaadka korontada ee FulmiBots-ka cusub waxay nolol ka dhigi kartaa warshadda Warshadda 'Konprissa Industries' inay xoogaa qasan ku tahay ciyaartooyda.
Maaddaama ciyaartoydu ay ujeeddooyinkooda ku wajahayaan waqti ku habboon, waxaa loo dallacsiin doonaa boosas badan oo abaalmarin leh oo ku saabsan khadka kulanka.
Ciyaartoydu waxay wajihi doonaan in ka badan 45 heer, habab badan oo ciyaarta ah, iyo boqollaal ujeedo yar-yar ah markay ogaadaan sirta Warshadaha Konprissa iyo, ugu dambeyn, waa inay dunida badbaadiyaan!
Si loogu raaxeysto tan iyo cinwaannada kale ee Apple Arcade, iPhone-keena iyo iPad-kena waa inay ahaadaan waxaa maamula macruufka 13 / iPadOS 13, halka Apple TV loogu talagalay tvOS 13 iyo haddii aan sidoo kale haysanno Mac, waxay u baahan tahay macOS Big Sur (macOS 11.oo dambe).
Cinwaankani waa ilaaliyaal dhinac saddexaad la jaan qaada, wuxuu la jaan qaadayaa Wadaagista Qoyska waxayna noo ogolaaneysaa inaan ku keydinno horumarka barnaamijka Game Center.
Frenzic: Waqti Dheeraad ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Ciyaaraha IPhone » Frenzic: Waqtiga dheeriga ah waa ciyaar xujo ah oo hadda laga heli karo Apple Arcade
7 sababood oo loo isticmaalo VPN-ka iPhone-gaaga ama iPad-kaaga